Shirkii Golaha Wasiirada Maanta ayaa inta Badan Looga Hadlay Weerakii Hotel Ambassador – STAR FM SOMALIA
Golaha Wasiiradda Xukuumadda Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay weerarkii Al-Shabaab ku qaadeen Hotel Ambassador ee magaalada Muqdisho.
Ugu horeyn Golaha Wasiirada ayaa warbixin ka dhageystay Wasiirka Amniga Gudaha Mudane Cabdirisaaq Cumar Maxamed, wuxuuna sheegay in waxyeelo ay ka soo gaartay falkaasi argagixiso dad isugu jira Shacab iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamanka F. Soomaaliya iyo askar.
Golaha Wasiirada ayaa Cambaareeyey weerarkii Argagixiso ee Hotel Ambassador, waxay Tacsi u direen ehellada Muwaadiniintii Soomaaliyeed ee falkaasi uu saameeyey. Golaha ayaa boggaadiyey Ciidamada Ammaanka sida dhiiran ee ay uga jawaabeen dhacadaadaasi. Iyagoo Guddi ka kooban Wasaaradaha Amniga, Caafimaadka, Arrimaha Dibadda, Awqaafta, iyo Dhalinyarada u saaray wax u qabadashada dadka ugu daran ee xaaladdooda caafimaad an dalka gudihiisa wax looga qaban Karin si dibedda loogu qaado.
Laamaha Ammaanka ayaa saaka waabarigii soo afjaray howl galka hotelka oo ay ku qabsadeen rag hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab, waxaana la dilay dhamaan raggii hotelka ka dhex dagaalamayay.
Dowladda Soomaaliya ayaa wali soo saarin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarka, waxaana lagu wadaa in saacadaha soo socda la soo bandhigo tirada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaas.